भिम अस्पतालमा सहमतिपछि स्वास्थ्यकर्मीको अनशन तोडियो - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ लुम्बिनी प्रदेश ∕ भिम अस्पतालमा सहमतिपछि स्वास्थ्यकर्मीको अनशन तोडियो
हेल्थ आवाज बिहीबार, २०७८ भदौ १७ गते, १९:०१ मा प्रकाशित
बुटवल—आमरण अनशनमा बसेका भिम अस्पताल भैरहवाका स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । अस्थायी कर्मचारीहरुको ग्रेड, तलब र अन्य सुविधाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग सहितको आमरण अनशन बिहिबार तोडिएको हो ।
दुई पक्षबीचको छलफलबाट सहमति जुटेपछि अनशन तोडिएको अनशनरत कर्मचारी गोपाल उपाध्यायले बताए । उनी तीन दिनदेखि अनशनमा बसेका थिए ।
अनशनरत कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न अस्पताका डा. बद्री बैदवारको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समस्या समाधान समिति समेत गठन गरिएको छ । समितिले माग सम्बोधनका लागि पहल लिनेछ । जसमा गोविन्दबहादुर ज्ञवाली र अनशनरत गोपाल उपाध्याय पनि सदस्य छन् । यो समितिले ७ दिनभित्र अस्पताल ब्यवस्थापन समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा अस्थायी कर्मचारीहरुको ग्रेड, तलब र अन्य सुविधाहरु प्रदान गर्ने सहमति भएको उपाध्यायले बताए ।
आन्दोलनरत् पक्ष, अस्पताल व्यवस्थापन समिति, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट र अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्षहरुको उपस्थितिमा सहमति भएको हो । अस्पताल प्रशासनले माग गरेको स्पष्टिकरण भने फिर्ता लिने भएको छ । सहमति भएपछि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शकुन्तला गुप्ताले उपाध्यायलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाएकी थिइन् ।
क्यान्सर अस्पताल खजुरामा पहिलोपल्ट दूरबिन प्रविधिबाट बिरामीको शल्यक्रिया